I-Wholesale HHC-0 Distillate | 2022 Izintengo Ezinhle Kakhulu
Siyaziqhenya ngokuthumela i-Hexahydrocannabinol-Acetate Distillate, eyaziwa nangokuthi i-HHC 0 Distillate ne-HHC-O Acetate Distillate, kanye ne-THC-O Acetate Distillate (eyaziwa nangokuthi iTHC-0) ukuze Japan abavela e-United States.
Umjaho Wokufakwa Kwezomthetho Kwe-Cannabinoid Nokwamukelwa Kwamasiko Uyahola!
I-Japan isanda kuvula izingalo zayo emikhiqizweni eyenziwe nge-hemp. Nokho, kwalandelwa iziqondiso eziqinile. Ngenxa yalokho, siye safunwa amaJapane nge-Hexahydrocannabinol O-acetate (eyaziwa nangokuthi i-HHCo ne-THC-O) -acetate, eyaziwa nangokuthi ngaphansi kwegama le-THCo.
Sinenhlanhla emangalisayo ukuthi muva nje sibambisene nelinye lamaqembu ambalwa kakhulu emhlabeni wonke aseqede yonke imibhalo yawo futhi agunyazwa nguHulumeni wase-Japan njengoMthumeli-mpahla ovunyelwe/ongenisa ngaphandle we-Hexahydrocannabinol Acetate. Eyaziwa nangokuthi i-HHC -O-acetate ne-HHCo ne-THC -O-acetate ebuye yaziwe nge-THCo to Japan.
Yiziphi izimfuneko zokuthutha i-Hexahydrocannabinol-Acetate Distillate, ebizwa nangokuthi i-HHCo Distillate ne-HHC-O Distillate, ne-THC-O-acetate Distillate e-Japan?
Kunemithethonqubo ethile. Le mithethonqubo ibaluleke kakhulu, kodwa hhayi kuphela:
Ukungenisa i-wholesale HHC-O distillate kanye ne-HHCo e-Japan, kufanele ngabe ugunyazwe ngokusemthethweni nguhulumeni.
Umkhiqizo akufanele uqukathe noma iyiphi i-THC. Ngenxa yamafomula aqondene ngqo nesi-Japan esiwasebenzisayo, izinto zethu zokusebenza ziyahlangabezana nalo mkhawulo.
Kufanele ukwazi ukufakazela iqoqo ngeqoqo ukuthi i-HHC, i-HHCo, noma i-THC-O acetate yakho ivela kuziqu ze-hemp zesilisa, imbewu, hhayi izimbali.
Njengamanje sithatha ama-oda afinyelela ku-1 kilogram (1 ilitha). Ngeke samukele ama-oda angaphansi kwekhilogremu engu-1 (1 Litre).
Lingakanani I-HHC-0 Distillate Business ene-Redemperorcbd.com Kwenziwe e-Japan?
Le makethe iseyintsha uma kuqhathaniswa nokushicilelwa kwale bhulogi. Ngikholwa ukuthi kulungile ukuthi singezinye zezingqalabutho emakethe. Kodwa-ke, sekuyiminyaka eminingana sithumela amaCannabinoids Asemthethweni emhlabeni jikelele futhi asithathi noma yimaphi amathuba ngemali yamakhasimende ethu.
I-Japan isafunda futhi sisebenza kanzima ukugcina inolwazi lwakamuva, oluvumelana nezimo futhi oluthobelana nemithetho eshintshayo yase-Japan.
Sithola ukuthi singakwazi ukuthumela ama-oda amancane, kodwa ama-oda amakhulu, ngenkathi sisebenza kuwo. Naphezu kokuba singaphambi kwesikhathi esimisweni sokugunyazwa kweCustoms siye sasulwa ngelebhu yozakwethu futhi manje siyakwazi ukuletha imikhiqizo yethu kumakhasimende anezikhathi ezinde kancane zokuvunyelwa. Umkhiqizo wakho kufanele ufike zingakapheli izinsuku ezingama-30-60 ngokwesilinganiso.
Asikwazi ukulawula isikhathi sokugunyazwa, kodwa singakuqinisekisa ukuthi sizosebenza ngokomsebenzi nangokomthetho ukuze sinciphise noma yiziphi izinkinga ezingaba khona.
Asisawathathi ama-oda we-HHC njalo, kodwa sizowathathela ama-oda Inani eliphakeme lempahla ye-THCo futhi Inani eliphakeme kakhulu lama-HHCo nge-THC engu-0%.
Ingabe ungathanda ukuthola okwengeziwe mayelana Nokuhlangenwe nakho Kwamazwe Ngamazwe Nge-Cannabis Esemthethweni? Umhlahlandlela wethu weCannabis wamazwe ngamazwe uyatholakala okwamanje kusukela ekushicilelweni kwale bhulogi.
Siyazwelana nokuhluka kwesikhathi, kodwa sinezisebenzi ezitholakala amahora angu-24 ngosuku ukuze sisize abangani bethu baseJapane. Zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi!
Unesibopho sayo yonke imiphumela.
Ukuze uthole iphasela lakho, uzodinga ukukhokha i-10% Yentela Yempahla Ethengiswayo futhi, cishe, kuyodingeka uyikhethe kwaCustoms.
Siphinde sithengise ama-terpenes - womabili ama-terpenes akhiwe kanye nama-live-terpenes.
Samukela KUPHELA isheke, ukudluliswa kwemali ngezintambo, i-oda lemali, noma uhlobo lwemali lwedijithali (inqobo nje uma unesibopho sokwehla kwamandla emali/ukwehliswa kwenani lohlobo lwemali lwedijithali).
Ngaphambi kokuthi sicubungule amaphepha, silinda ukuthi imali iphume ku-akhawunti yethu yasebhange.
I-Customs izothumela amaphepha egameni lakho. Uma ifika, bazoxhumana nawe nge-imeyili noma ngefoni.
Kanye ngesonto, sithumela futhi senza ama-oda e-THCo/HHCo. Sithumela ama-oda ngoMsombuluko ngoba inqubo eyinkimbinkimbi.
Ukuze kucutshungulwe amaphepha, uLwesithathu ongaphambi kosuku lokuvalwa kwama-oda wesonto elizayo luwukunqanyulwa.
Ama-oda ekhadi lesikweletu awamukelwa.
Njengamanje, ukuthunyelwa kuthatha cishe amasonto amabili.
Ezinye izinketho ku-Hexahydrocannabinol Acetate. Eyaziwa nangokuthi i-HHCO-acetate ne-HHC-0 ne-THCO-acetate. Yaziwa nangokuthi iTHC-a0 Japan:
IDelta 8 iTHC
I-Delta 9 ehambisanayo namaGummies
IDelta 10 iTHC
I-Wholesale HHC-O Distillate – Hexahydrocannabinol – Acetate
I-HHC-O (i-hexahydrocannabinol-acetate) ingenye yama-cannabinoids amasha ukungena embonini ye-cannabis. Kuyi-cannabinoid ethathwe ekuhlukaniseni kwe-CBD. I-CBN, CBC kanye ne-CBG amanye ama-cannabinoids atholakala ku-hemp athola ukuduma.
Imiphumela ye-HHC-O ingacishe ifane ne-delta 9 THC. Yingakho i-HHC-O iyi-cannabinoid enamandla kune-delta 8 THC. I-HHC manje isitholakala kalula ngamanani amakhulu ukuze ihlangabezane nesidingo semakethe.
Ulwazi mayelana ne-Wholesale yethu ye-HHC-O Distillate Products
Iqukethe 98%+ Inani lama-cannabinoids asebenzayo (TAC).
Iqukethe ngaphansi kuka-0.3% Delta-9-THC
Yonke imikhiqizo yethu ye-HHC-O ivela ku-HHC etholakala ku-hemp. Zisemthethweni ngaphansi komthetho wombuso kanye nowezwe. Unesibopho sokunquma ukuthi lo mkhiqizo usemthethweni yini endaweni yakini noma endaweni ngaphambi kokuthenga i-HHC ku-inthanethi.
Imboni yeCannabis idlulele ngale kwemikhiqizo ye-CBD ne-THC ukuze inikeze amanye ama-cannabinoids. Kunemikhiqizo eminingi equkethe i-delta 8 THC, i-CBC ne-CBN kanye ne-THC-O. Namuhla, i-HHC-O (hexahydrocannabinol-acetate) iyavela.
I-HHC-O, i-cannabinoid enamandla etholakala ezitshalweni ze-cannabis, yaziwa ngokuthi "i-cannabinoid enamandla". Ifana kakhulu ne-THC. Okwenza i-hexahydrocannabinol-acetate ihluke i-hydrogenation ne-acetylation. Kumane nje kuyi-hydrogenated delta 8 THC. Umkhiqizo ube usufakwa i-acetylated ukwenza i-HHC-O. Ukusabela kwamakhemikhali phakathi kwe-hydrogen ne-THC kushintsha isisindo samangqamuzana omkhiqizo kanye nesakhiwo sejometri. Lokhu kubangela inhlanganisela ezinzile ekwazi ukumelana nokushisa futhi eneshelufu nempilo ende.
I-THC ne-HHC-O zinesakhiwo samangqamuzana esicishe sifane, esingadida isibukeli esingaqeqeshiwe. Kunomehluko obalulekile owenza i-HHC O izinze. Lo mehluko ungaphinda uguqule imiphumela ye-psychoactive HHC. I-HHC-O isebenza ngokwengqondo kakhulu kunozakwabo we-HHC futhi ingase isebenze ngokwengqondo kakhulu bese i-delta-9 THC.
Okuphezulu kufana namanye ama-cannabinoids asebenza kwengqondo, akhiqiza imizwa efanayo yenjabulo njengalapho uwathatha. Indlela yokusetshenziswa izonquma ubude bemiphumela. I-HHC-O ingase ibe namandla kancane kuleyo delta 9, kodwa isenamandla kakhulu kune-delta 8. I-HHC-O ingasetshenziselwa ukuthola ukuphakama okusemthethweni okunamandla kune-delta 9.
Okwamanje asikwazi ukwenza izitatimende eziqondile mayelana nezinzuzo zokwelapha ze-HHC. Kuzodingeka silinde kuze kube kwenziwa olunye ucwaningo mayelana nezakhiwo zokwelapha nama-cannabinoids e-HHC. Iningi lezitatimende mayelana nezinzuzo zezempilo ze-HHC-O zisekelwe kuphela kokuhlangenwe nakho komuntu siqu.
Ikhiqizwa kanjani i-HHC-O?
Kukhona imakethe enkulu yamanye ama-cannabinoids avela ku-hemp. Ukuze ukhiqize amanani abalulekile e-HHC, udinga izitshalo eziningi ze-hemp. Kuyadingeka ukwenza i-hydrogenate noma uhlukanise i-hemp ukuze uthole amanani anengqondo wama-cannabinoids.
I-isomerization kanye nokukhishwa kwe-CBD etholakala ku-hemp kuyadingeka ukuze kukhiqizwe amanani abalulekile e-delta 8 THC noma i-delta 10 THC ngezinjongo zokuthengisa. Inqubo efanayo ingasetshenziswa ukukhiqiza amanani abalulekile we-HHC kusetshenziswa i-CBD. Inqubo ihluke kancane njengoba isebenzisa inqubo ye-hydrogenation kune-isomerization. I-HHC ayikwazi ukukhishwa ngokwemvelo ngamanani anele ukwenza amanani abalulekile, ngakho-ke kufanele iguqulwe isuka ku-CBD. I-HHC ingase ibe ne-acetylated ukuze yenze i-HHC-O.
Injani i-Hexahydrocannabinol-acetate Legal?
Umthethosivivinywa Wepulazi ka-2018 ugunyaza i-hemp nakho konke okuphuma kuyo. Izitshalo ezisemthethweni ze-hemp (Cannabis Sativa), ziqukethe ngaphansi kuka-0.3% THC, isakhi se-psychotropic esitholakala ku-cannabis. ICannabis Sativa ithathwa njengensangu uma idlula i-0.3%.
I-HHC ekhishwe esiyisebenzisayo i-100% federally hemp ye-hemp. Ukukhishwa kwe-hemp akudluli u-0.3% we-delta-9 THC ngesikhathi senqubo yokukhiqiza. I-HHC, njenge-delta 8 kanye ne-10, isemthethweni ezingeni likahulumeni inqobo nje uma ikhishwa ku-hemp.
Indlela yokusebenzisa i-HHC-O
Ungasebenzisa i-HHC ngendlela efanayo ne-CBD ne-delta 8 THC. Indlela osebenzisa ngayo i-HHC izonquma ukuthi iqala nini ukusebenza.
Umkhiqizo ungasetshenziswa ukugcwalisa i-HHCO vape cartridges. Ilungele ukudala ama-cartridge we-vape ngokushesha futhi kalula ngenxa ye-viscosity yawo ephansi. Imiphumela ye-vaping iyashesha. Umhwamuko uhogelwa ngokushesha bese ungena emaphashini akho. Bese lingena ngqo egazini lakho. Okuphezulu kuzoqala ukubonakala emaminithini ambalwa. Ngokwesilinganiso, imiphumela ihlala amahora amabili kuya kwamathathu.
I-HHC-O nayo ingafakwa ekudleni. I-HHC-O ingasetshenziswa ukwenza amakhukhi, ama-gummies, amakhekhe, ama-dessert, noma okunye okudliwayo. I-HHC-O icishe ifane ne-delta 9 THC ngokwemiphumela namandla. Abanye abasebenzisi bathi i-HHC-O inamandla kakhulu kune-delta-9 THC. Izinga lakho lokubekezelela iTHC kufanele libe yisisekelo somthamo wakho.
Ukwenza ama-tinctures, i-HHC ingahlanganiswa namafutha e-MCT noma amafutha embewu ye-hemp. Ama-tinctures angasetshenziswa futhi ukuphatha izinto ezidliwayo ezifakwe ku-HHC noma ngolimi oluncane. Uzozwa imiphumela kungakapheli imizuzu embalwa uma i-tincture ifakwa ngaphansi kolimi lwakho. Thatha uhlobo oludliwayo lomuthi okungenani amahora angu-1 kuya kwangu-2 ngaphambi kokuba uzwe noma yimiphi imiphumela.
Imikhiqizo yethu ye-hexahydrocannabinol-acetate ayihlolwa yi-FDA.
I-HHC-O akufanele isetshenziselwe ukuxilonga, ukwelapha noma ukwelapha noma yisiphi isifo.
Ngaphambi kokusebenzisa umkhiqizo wethu, thintana nodokotela wakho.
Uma uthatha imithi kadokotela, thintana nodokotela wakho.
Uma ukhulelwe, noma unesi, ungasebenzisi umkhiqizo wethu.
Ngaphambi kokusebenzisa lo mkhiqizo, thintana nodokotela wakho.
Ukuhlolwa Kwezidakamizwa kanye ne-HHC-O
Ayikho idatha eyanele mayelana nokuthi i-hexahydrocannabinol-acetate (HHC-O) ingathinta kanjani ukuhlolwa kwezidakamizwa. Ama-metabolites e-HHC-O angabangela imiphumela engamanga ekuhlolweni kwe-THC metabolites. Uma kudingeka ukuthi uphumelele ukuhlolwa kwezidakamizwa, ungawusebenzisi lo mkhiqizo.
Thenga Imikhiqizo ye-HHC-0 ku-inthanethi kusuka Ngikubize.com